YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sean McAnn လိပ်ကျွန်း မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ
Sean McAnn လိပ်ကျွန်း မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်း မှာ စောစော စီးစီး လိပ်ကျွန်း သဘောင်္ဆိပ်သို့ ထွက်ပြေး ခဲ့သူ Sean McAnn
Sean McAnna ဟာ စကော့တလန် နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး လိပ်ကျွန်း ကိုရောက် နေတာ လူသတ်မူ့ မဖြစ်ခင် ၂ပတ် လောက်မှာပါ။ သူဟာ ဟိုတယ်မှာ အလုပ် လုပ်ဘို့နဲ့ လမ်းဘေးဂစ်တာတီး ပိုက်စံ တောင်းဘို့ အတွက် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့ ည ဘီယာဆိုင် မှာ ဘီယာ သောက် နေစဉ် ထိုင်း မာဖီးယား ၂ဦး ရောက်လာပြီး ၊ သူ့ကို Hannah Witheridge, 23, and David Miller, 24, လူသတ်မူ့ အကြောင်း မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုသူ ၂ဦး မှ သူ့အား မင်းကိုယ့်ကို ကိုယ်ကြိုးဆွဲ ချ သေတာကို ငါတို့ ထိုင်ကြည့်မယ် ။ မင်းမလုပ်ဘူးဆို ငါတို့မင်းကို သတ်မယ် လို့ ပြောလိုက်ရာ Sean McAnna ဟာ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ထို မာဖီးယား ၂ဦးဟာ သူ့ကို လိုက်ဖမ်း ကြရာ၊ သူဟာ တစ်ညလုံး ဖွင့်တဲ့ စူပါ မားကတ် ရဲ့ ကောင်တာ အောက်မှာ ပုံးနေခဲ့ပါတယ် ။ မာဖီးယား ၂ဦး ဟာ သူ့ကို ရှာမတွေ့ ခဲ့ပါဘူး ။ ကောင်တာ အောတ်မှာ ပုံးနေစဉ် သူ့ရဲ့ ဖုန်းမှတဆင့် သူ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ‘Thai Mafia are trying to kill me. Please help me.’ လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ အီတလီ မှသူ့ရည်းစား၊ စကော့တလန်မှ မိခင် တို့အား လဲ ဖုန်းခေါ် ပြီး သူသာ သေခဲ့ရင် ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိစေချင်ကြောင်း နှင့် Hannah Witheridge, 23, and David Miller, 24, တို့အား မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူဟာ ထို ထိုင်းမာဖီးယား ၂ဦး ဖြစ်ကြောင်း ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထို ညဈေး ကောင်တာ နောက်မှာ ပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့စွာ ဖြင့် ထိုင်းရဲ ကို ဖုန်းဆက်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းရဲတွေ ရောက်လာစဉ် မာဖီးယား ၂ဦး ဟာ ထွက်ပြေး သွားပြီး သူ့အား ရဲများမှ တည်းခိုရာ ဟိုတယ် သို့ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ သို့သော် သူ တည်းခို ရာကို သိနိုင်မည် ဟု စိုးရိမ်ပြီး သူဟာ တောထဲကို ပြေးပြီး ပုံးရှောင်ပြန်ပါတယ်။ သူ့အား မြင်မှာစိုးရိမ်ပြီး နာရီဝက် တစ်ခါ နေရာပြောင်း ပြီးတောထဲမှာ ပုန်းခို ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုသို့ ပုန်းခိုနေစဉ် အတွင်းမှာ လဲ အင်္ဂလန် သံရုံး နှင့် ဖုန်း ကြာစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သံရုံးမှ အကူအညီ ချက်ချင်း မပေးနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ ထိုကျွန်း သေးသေးလေး ကို အရောက်လာကူ ဘို့ အင်အား မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပါ။တစ်ညတည်းမှာ ၂ခါပုန်းရှောင် ခဲ့ရသူ Sean McAnna ပြောပြ လိုက်တာ ကတော့ " They needed someone to pin he said, because they didn’t want the killers to be locals."
‘They want it to beaWesterner, so if I kill myself here, if I hang myself here, then it’s easy to say “See, it was him.”’
ထိုမာဖီးယား တွေက လူသတ်သူ ဟာ ထို ကျွန်းသား မဖြစ်စေချင်တာကြောင့် လှည့်စားကွက် လုပ်ရန်၊ လူသတ်သူ ဟာ အနောက်တိုင်းသား ဖြစ်စေချင် တာရယ်၊ သူ့အား ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွဲကြိုး ချ သေခိုင်း ခြင်းဟာ ၊လူသတ်မူ့ ကြောင့်ပါလို့ လွယ်လွယ်လေး သူ့အား အပြစ် ပုံချ ဘို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ They had acted too slowly, he said, and had failed to seal the crime scene allowing people to trample over it and destroy much of evidence that might be there။။ ထို့အပြင် ဒီလူသတ် သမား အစစ်ကို ရှာဘို့ ထိုင်းရဲ တွေ အတွက် မလွယ်ကူ တော့ပါဘူး ။ ရဲများ ရဲ့ နှေးကွေးစွာ လုပ်ဆောင်မူ့ နှင့် သက်သေ ပစ္စည်းများစွာ လဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် လို့Sean McAnna က ဖြည့်စွက် ပြောလိုက်ပါတယ် ။Sean McAnna ဟာ သေဆုံးသူ Miss Witheridge and Mr Miller.တို့ကို အသတ်မခံ ရစဉ် ၌ ပါတီ လုပ်တဲ့ နေရာ တွေမှာ တွေ့ကြုံ ခဲ့ဘူး သူ ဖြစ်ပါတယ်။
******စဉ်းစား စရာကတော့ ထိုကျွန်းကို ခရီးသွား အပျော်ရှာ သူများ မလာတော့မည် ကို စိုးရိမ် မိသော မာဖီးယား တို့ ဟာ မိမိ ကျူးးလွန်မူ့ ကို ရဲနှင့် ပေါင်းပြီး လုပ်ကြံ ဇတ်လမ်း ခင်းလိုက် ခြင်းပင်။*********
@csi la, I don't haveameans of contacting you directly. I deleted Facebook and I'm not giving out my email address or phone number.
The cut was from my bike, so was the burn on my leg. I don't know why that's hard to understand. I've said it enough times. In any case, if it needs to be proven I can use video evidence fromabar I went to on the 10th and 11th. But they don't want the attention of plastic detectives or bad custom ruining their bar. Main thing is, it's provable. And the police took the blood from my guitar and my bag, which matched my DNA (I had everything on when I came off the bike, hence why they had blood on them). After the crash I went straight to the dive shop I was going to be working with and they seen it too (they had to sort my accommodation as part of the course)
Also, to the other username guy: I spoke to the Sunday mail. They haven't put anything up yet, but the full conversation was about what happened the night I got chased to the shop, and why the accusations are being thrown my way. I've also mentioned that no one believes it was the2Burmese guys and anyone would be stupid to even consider it.
But listen to me. You don't know me. You don't know how this has affected me. You are wrong about me. So think about what that means to tell someone that they've murdered their friend, or that they're holding something back which could help the family get past it or save two lives. I'm devastated mate. But no, I'm not scared for my life. I'm in Europe inaflat withajob andagirlfriend. If I had anything worth saying I would say it. Again, the papers misconstrued my comments disastrously. I've done nothing wrong and although I want people to keep pushing on this case to get it solved, I also want people to haveabit of consideration and ask themselves "what if I'm wrong?" before insulting me onaplace where my mother and sisters can read your spiteful little comments.
BY YeYint Nge ... 10/13/2014
ထိုင်းစစ်တပ် သိပ်မုန်းတဲ့ သင်္ကေတ
နံမယ်ကြီး နတ်ကော်န် ချွန်ဖူးချက် မြန်မာလူမျိုးဘက်မ...
မြန်မာသံရုံး၊ ဗြိတိန်သံရုံးနှင့် ထိုင်းဘုရင့် ရဲတပ...
မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးကို နောက်ထပ် ပြစ်ချက်တစ်ခုထပ်မံဖြ...
ကိုယ့်လူမျိုး အန္တရာယ် ဖြစ်မယ့်ကိစ္စ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ ...
လက်ထိပ်ခတ်ပြီး အမျိုးသမီး ကိုရိုက်တာရဲကျင့်ဝတ်တဲ့လား။